Isitudiyo esikhulu nesitofotofo, kufutshane nolwandle. - I-Airbnb
Isitudiyo esikhulu nesitofotofo, kufutshane nolwandle.
Ikhaya leholide yonke sinombuki zindwendwe onguMariaTeresa
ye-IUN QŘ50 Istudiyo esikhulu
nesitofotofo Iphakathi phantse kuzo zonke iindawo onokutyelela kuzo eMzantsi okanye eMntla. Le ndlu inamagumbi aliqela ibe ilungiswe kakuhle. Ifenitshala intsha ibe ikwimeko entle. Kukho izikrini zeengcongconi kwizinambuzane. Ungayipaka lula imoto yakho egadini uze wonwabele ityeya. Indawo yokuhlala ikwindawo entle: imizuzu eyi-5 ukusuka elunxwemeni nemizuzu eyi-15 ukusuka ezintabeni . Ikwisitrato sabucala esilula, ngoko akukho
ngxolo imini nobusuku.
Indawo yokuhlala ikwindawo ethe cwaka kakhulu ngaphandle kwidolophana yaseCardedu malunga ne-1000 m ukusuka embindini kwaye unxweme olufanelekileyo lukumgama wemizuzu emine kuphela ngemoto. Ilizwe linazo zonke iinkonzo eziyimfuneko: imarike, ivenkile yecuba, ibhari, ivenkile yokutyela, i-pizzeria, i-ATM. I-Newsstand, i-baker, ivenkile yeentlanzi, iziqhamo nemifuno.
Le ndlu yakhiwe kwigumbi elinye: indawo, indawo yokutyela-ukuphola nesofa, ikhitshi elivulekileyo, nendawo entle, indawo yebhedi elala abantu ababini, igumbi lokuhlambela elineshawa etofotofo.
Izinto ezifumanekayo ziquka:
umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu, i-TV eyi-32 ", ioveni, ifriji/i-deep freezer, i-microwave, ikhitshi elineenkonzo zokupheka ezisisiseko: iimbiza, iipani, izitya, isixhobo sokomisa iinwele, iayini nebhodi yokuayinela, iinethi zeengcongconi. Izinto zebhedi neetawuli ziqukiwe . I-intanethi engenazintambo.
Le ngingqi yindawo esedolophini kwindlela ephambili eya elwandle ( Jonga iifoto) Ii-Orchards, izidiliya, izindlu eziphangaleleyo kuyo yonke le ndawo ithuleyo.
Umbuki zindwendwe ngu- MariaTeresa
Ndingathanda undwendwe aluhloniphe umzi, kube ngathi ngowakhe.
Inombolo yomthetho: IUN Q0750
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cardedu